အခုလိုအခြေအနေကြောင့် ရှောင်တိမ်းနေရပေမယ့်လည်း ရရင်ရသလို ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ ဟန်နီနွေဦး….. – Cele Snap
သရုပ်ဆောင် ဟန်နီနွေဦးကတော့ လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ထပ်တူ ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ဒါ့အပြင်သူမရဲ့ အကောင့်ကနေလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်သမျှတွေကို ကမ္ဘာသိအောင် အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီဖော်ပြပေးခဲ့သလိုအရေးကြီးလိုက်နာသင့်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း ဝေမျှပေးခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်နီနွေဦးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့ကတည်းက ပြည်သူအားလုံး စတင်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ လမ်းပေါ်ထွက်လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အားဖြည့်ပါဝင်နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။သူမကိုယ်တိုင်လည်း လမ်းမပေါ်ထွက်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မျိုးစုံပါဝင်ခဲ့သူတစ်ယောက်မို့အားလုံးက လေးစားနေရတာပါ။ဖြိုခွင်းမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားက သွေးအေးမသွားဘဲ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အားဖြည့်ပါဝင်နေတာသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
အခက်အခဲတွေကြားက သွေးမအေးသွားဘဲ ရဲရင့်စွာလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ ဟန်နီနွေဦး ရဲ့ ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ စိတ်ထားတွေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေအားလုံးက သဘောကျနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်..။လက်ရှိအခြေအနေတွေအရ ရှောင်တိမ်းနေရပေမယ့်လည်း ပြည်သူတွေ နဲ့ အနာဂတ်တွေ အတွက် တတ်နိုင် သလောက် အားဖြည့်လုပ်ဆောင်နေပြီးရရင်ရသလို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုလည်း ဟန်နီနွေဦးက သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ ပြန်လည်မျှဝေထားပါသေးတယ်..။
“ယနေ့ ရန်ကုန် သပိတ် ✊🏻ရတဲ့အချိန်မှာ ရသလိုဆန္ဒဆက်ဖော်ထုတ်ကြရမယ်ငါတို့ကဘာတွေလဲ ? ရန်ကုန်သားတွေ !”ဆိုပြီး လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။သွေးမအေးသွားဘဲ လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့ ဟန်နီနွေဦးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေက ချီးကျူးကာ အားပေးစကားတွေလည်း ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
သရုပျဆောငျ ဟနျနီနှဦေးကတော့ လကျရှိအခွအေနတှေနေဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့ထပျတူ ရပျတညျနသေူပဲ ဖွဈပါတယျ..။ဒါ့အပွငျသူမရဲ့ အကောငျ့ကနလေညျး မွနျမာနိုငျငံမှာနစေ့ဉျဖွဈပကျြသမြှတှကေို ကမ်ဘာသိအောငျ အခြိနျနဲ့တဈပွေးညီဖျောပွပေးခဲ့သလိုအရေးကွီးလိုကျနာသငျ့တဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှကေိုလညျး ဝမြှေပေးခဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
ဟနျနီနှဦေးကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့လ ဖဖေျောဝါရီ ၁ရကျနကေ့တညျးက ပွညျသူအားလုံး စတငျခဲ့တဲ့ တျောလှနျရေးတိုကျပှဲကွီးမှာ လမျးပျေါထှကျလူထုလှုပျရှားမှုတှေ ပွုလုပျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ အားဖွညျ့ပါဝငျနတောလညျး တှရေ့ပါတယျ..။သူမကိုယျတိုငျလညျး လမျးမပျေါထှကျကာ လှုပျရှားမှုတှမှော မြိုးစုံပါဝငျခဲ့သူတဈယောကျမို့အားလုံးက လေးစားနရေတာပါ။ဖွိုခှငျးမှုတှရှေိနတေဲ့ကွားက သှေးအေးမသှားဘဲ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ အားဖွညျ့ပါဝငျနတောသူလညျး ဖွဈပါတယျ..။
အခကျအခဲတှကွေားက သှေးမအေးသှားဘဲ ရဲရငျ့စှာလှုပျရှားမှုတှပွေုလုပျနတေဲ့ ဟနျနီနှဦေး ရဲ့ ခိုငျမာပွတျသားတဲ့ စိတျထားတှနေဲ့ လှုပျရှားမှုပုံရိပျတှကေိုလညျး ပရိသတျတှအေားလုံးက သဘောကနြကွေတာ ဖွဈပါတယျ..။လကျရှိအခွအေနတှေအေရ ရှောငျတိမျးနရေပမေယျ့လညျး ပွညျသူတှေ နဲ့ အနာဂတျတှေ အတှကျ တတျနိုငျ သလောကျ အားဖွညျ့လုပျဆောငျနပွေီးရရငျရသလို ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့ကွောငျးလှုပျရှားမှုပုံရိပျတှကေိုလညျး ဟနျနီနှဦေးက သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနေ ပွနျလညျမြှဝထေားပါသေးတယျ..။
“ယနေ့ ရနျကုနျ သပိတျ ✊🏻ရတဲ့အခြိနျမှာ ရသလိုဆန်ဒဆကျဖျောထုတျကွရမယျငါတို့ကဘာတှလေဲ ? ရနျကုနျသားတှေ !”ဆိုပွီး လှုပျရှားမှုပုံရိပျတှကေို ဝမြှေထားတာ ဖွဈပါတယျ..။သှေးမအေးသှားဘဲ လှုပျရှားမှုတှဆေကျတိုကျပွုလုပျနတေဲ့ ဟနျနီနှဦေးရဲ့ လှုပျရှားမှုပုံရိပျတှကေိုလညျး ပရိသတျတှကေ ခြီးကြူးကာ အားပေးစကားတှလေညျး ပွောထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။